Uma Ithimba Lakho Lokuqukethwe Likwenzile Lokhu, Uzobe Uphumelela | Martech Zone
Kunenqwaba yama-athikili laphaya asevele abonisa ukuthi okuqukethwe kubi kangakanani. Futhi kunezigidi zama-athikili wokuthi ungakubhala kanjani okuqukethwe okuhle. Kodwa-ke, angikholwa ukuthi noma yiluphi uhlobo lwendatshana lusiza kakhulu. Ngikholwa ukuthi umsuka wokuqukethwe okungalungile ongasebenzi into eyodwa nje - ucwaningo olubi. Ukucwaninga kahle isihloko, izethameli, izinhloso, umncintiswano, njll. Kuholela kokuqukethwe okwesabekayo okungenazo izakhi ezidingekayo zokuwina.
Abakhangisi bafuna ukusebenzisa imali ethe xaxa ekukhangiseni okuqukethwe, kepha basasokola ukukhiqiza okuqukethwe okubandakanya (60%) nokukala ukusebenza (57%). USujan Patel
Hhayi nje ukuthi silwela ukukhiqiza nokukala amasu ethu wokuqukethwe, empeleni sikhiqiza okuqukethwe okuningi kunokuba kungasetshenziswa. Umngane wami omuhle uMark Schaefer, ubiza lokhu ukushaqeka kokuqukethwe.
Ngiyazi ukuthi uphansi kwenqwaba yeziphazamiso ezivela kokuqukethwe okumangazayo ngokwandayo. Ngami ukugcina nje "i-mindhare" enginayo namuhla kule blog, kuzofanele ngidale okuqukethwe okungcono kakhulu, okuzothatha isikhathi esithe xaxa. Kuzofanele ngikhokhe i-Facebook nabanye ukuze ngikunike ithuba lokuyibona ngenxa yalo mncintiswano wokuqukethwe ukuze unakwe. UMark Schaefer
Inkinga iyaqhubeka nokukhathaza abakhangisi kule minyaka embalwa edlule, ngakho-ke bengisebenza nezikhungo ezehlukene zemfundo ekwakheni amakharikhulamu abo wokumaketha okuqukethwe. Sekukonke, ngithuthukise eyethu uhambo lokukhangisa olushesha, futhi ukuqeqeshwa ngaphakathi kuhlanganisa inqubo yokuthi amaqembu ethu athuthukise okuqukethwe kwamakhasimende ethu kanye nezakhiwo zethu.
Akulula futhi kudinga umzamo, kepha nalu uhlu lokuhlola ukuqinisekisa ukuthi iqembu lakho lizokhiqiza okuqukethwe okuhle kakhulu:
Uhlu Lokuhlola Lokuwina
Imigomo - Uzama ukufezekisa ini ngokuqukethwe kwakho? Ngabe iyashicilelwa ukwakha ukuqwashisa, ukuzibandakanya, igunya, ukuguqula ukushayela, ukuthuthukisa ukugcinwa, ukukhuphula amaklayenti, noma ukuthuthukisa ulwazi olubanzi lwamakhasimende? Uzolinganisa kanjani ukuthi kusebenze noma cha?
Izilaleli - Ubhalela bani futhi bakuphi? Lokhu akugcini nje ngokuyalela ukuthi ukuthuthukisa kanjani okuqukethwe kwakho, kuzokuholela nokuthi ushicilele futhi uphromothe okuqukethwe kwakho kuzingxenyekazi ezahlukahlukene noma kuma-mediums ahlukahlukene.
Market - Okuqukethwe kwakho kuzokwenza kanjani uphawu embonini yakho? Yini okudingayo ukuze kuqhutshwe ukunakwa nokuzibandakanya?
Ucwaningo - Yiziphi izibalo ezikhona lapho ezixhasa okuqukethwe kwakho? Izibalo zihlala zitholakala kalula futhi kulula ukuzithola. Sisebenzisa i-Google, ngokwesibonelo, sibheke izibalo zokumaketha okuqukethwe ukuthola ukucaphuna kukaSujan ngenhla.
Competition - Yikuphi okuqukethwe okhiqizwe umncintiswano wakho ngesihloko? Ungakudlula kanjani okuqukethwe kwabo? Sivame ukwenza i-SWOT elula (Amandla, Ubuthakathaka, Amathuba, Izinsongo) zeklayenti lethu nesihloko sokufaka abahlukanisi futhi sishayele imigomo yabo ekhaya. Isebenzisa Semrush nakuBuzzsumo, singahlaziya okuqukethwe okuhle kakhulu nokwabiwe kakhulu kuleso sihloko.
Amafa - Izithombe ezifakiwe, imidwebo, izithombe-skrini ezisekelayo, umsindo, ividiyo… yiziphi zonke ezinye izinto ongazihlanganisa kokuqukethwe kwakho ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe ngokuwina?
Kubhala - Isitayela sethu sokubhala, uhlelo lolimi, isipelingi, ukuchaza inkinga, ukuqinisekisa izeluleko zethu, ukuthuthukisa ukubizelwa esenzweni… konke kuyadingeka ukukhiqiza okuqukethwe okufanele ukunakwa ngabalaleli bethu.
Akunandaba noma ngabe i-tweet, i-athikili, noma iphepha elimhlophe, siyaqhubeka nokubona impumelelo lapho sakha umugqa wangaphambi komhlangano wokuthuthukisa okuqukethwe kwethu. Kumaphrojekthi amaningi, sisebenza namaqembu ahlukene avela kuwo wonke umhlaba ukuhlanganisa izimpahla ezidingekayo ukukhiqiza okuqukethwe okuhle. Sineqembu lokucwaninga lokuthwebula izibalo nabathonya, abafundela umsebenzi wokuhlaziya, amaqembu okwakha imidwebo, nokukhethwa kwababhali abakhethwa ngesandla ngenxa yesitayela sabo kanye nokufaneleka kwezihloko.
Futhi nangemva kokushicilela okuqukethwe, asikaqedi okwamanje. Sibuka ukuthi sisebenza kanjani ekusesheni nakwezenhlalo, silungisa izihloko nezincazelo ze-meta ukuze sisebenze kahle, sithuthukise okuqukethwe okudala ngemidwebo namavidiyo, futhi kwesinye isikhathi siphinde sishicilele izindatshana njengezindatshana ezintsha lapho kunengqondo. Zonke izinqumo maqondana nokuqukethwe kwethu zenziwa ukuqinisekisa ukuthi kuyikho Ukunqoba, hhayi nje okushicilelwe.
Tags: izethameliIgunyaUkuqwashisaamafa wokuqukethweUkukhangisa Okuqukethweimigomo yokuthengisa okuqukethweisipiliyoni samakhasimendeukushayela ukuguqulwalwekucocisanathuthukisa ukugcinwaucwaningo lwemaketheAmathubaucwaningoamandlaswotIzinsongoamaklayenti e-upsellUkubuthakathakaokuqukethwe ngokuwinaKubhala
Jun 25, 2017 ku-11: 59 PM
Ngiyavumelana nalokho okuvezile. Ucwaningo olunzulu luyisidingo esiyinhloko sokukhipha i-athikili enhle evame ukwengeza inani kubantu. Inqubo yesakhiwo esisezingeni eliphakeme eyenziwe yiBrain Dean iyisibonelo. Ukwakha i-athikili ejulile egxile kakhulu kumaphoyinti athile we-niche ekhonjiwe kuzonikeza imiphumela engcono. Kuyasiza futhi ukumela ibhizinisi njengomkhiqizo othembekile / onegunya.